Nhau - Chitubu kubuda
Muchirimo cha2020, kambani yakaronga kubuda kwechirimo kwevashandi. Chinangwa chekubuda kwechirimo uku kuwedzera mufaro wevashandi uye kuwedzera kushingairira kwevashandi. Chinangwa chekambani yedu Kubatana, kutsvaga chokwadi, hunyanzvi.
Iko kuenda kwekubuda kwechirimo uku Qingdao No. 1 Kugeza Gungwa. Qingdao No. 1 Kugeza Beach, inozivikanwawo seHuiquan Beach, iri muHuiquan Bay, Qingdao Guta. Inogona kugadzirisa makumi ezviuru zvevanhu kushambira panguva imwe chete. Kubva munaChikunguru kusvika Nyamavhuvhu gore rega rega, kupisa mukati mukati kwakaoma, asi Qingdao inotonhorera uye inofadza. Vanhu vazhinji vanouya pano kubva kumativi ese, vachiunza vana nevanasikana, kana mumapoka evatatu kana vashanu, kana vaviri vaviri. Kwenguva yakati, mahombekombe akafara akazara nevanhu uye vanhu vaiuya vachienda. Vanhu vakanakidzwa nezvipo zvisina kuzvipira zvakasikwa senge zuva, mhepo, mahombekombe uye mhepo yegungwa, vachinakidzwa nerunako rusingaperi rwegungwa muzhizha. Mushure menguva yezhizha, vashanyi vakaderera zvishoma nezvishoma. Munguva yechando, bhati rekutanga harina kumbove rakasurukirwa. Pachine vashanyi pamahombekombe, uye vanofarira kushambira munguva yechando vanowanzoonekwa vachishambira mugungwa mumhepo inotonhora, saka tinosarudza iri gungwa sekuenda. Tembiricha muchirimo yakakodzera. kambani. Panguva imwecheteyo, nhengo dzemhuri dzevashandi dzinokokwa pamwechete. kuwedzera mufaro wemhuri uye kuwirirana, Vana vazhinji vari kutamba pamwe chete, pakupedzisira Chiitiko chekubuda kwechirimo chakabudirira zvakakwana.
Iyo kambani inoronga vashandi kuti vatambe gore rega, vachitarisira kuwedzera mufaro wevashandi pabasa. Vasati vafamba, vatungamiriri vekambani vanoronga nzira yekufamba zvakadzama, vanoedza kuenda kunzvimbo dzakasiyana nguva imwe neimwe, kuwedzera ruzivo rwevashandi, uye kuronga kumberi. yezvinetso zvingamuka munzira kuti udzivise matambudziko panguva yekufamba.